Skype ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်များ - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 09/05/2022 22:58 | applications များ
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ပရိုဂရမ်တွေကို စဉ်းစားတဲ့အခါ စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ ပထမဆုံးနာမည်က သံသယမရှိဘဲ၊ Skype ကို. ပြီးပြီ၊ အသုံးအများဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ကုမ္ပဏီတွေကရော တစ်ဦးချင်းက ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာရော။
Skype ကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က မွေးဖွားခဲ့ပြီး မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာများနှင့် ကွန်ပျူတာများမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်မှုပုံစံကို တော်လှန်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် လူကြိုက်အများဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ်တွင် သူငယ်ချင်းများနှင့် အလုပ် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောကိရိယာ မဟုတ်ပါ။ Skype ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အခြားသော ပရိုဂရမ်တွေ ရှိပါသေးတယ်။
မိသားစုနှင့်ဝေးကွာခဲ့သည့် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားသည့်နှစ်များတွင် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဥ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, Skype အတွက် ရှိပြီးသား အခြားရွေးချယ်စရာများကို သိရန်နှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပြီးတော့ သင်ရှာနေတဲ့အရာကို ကမ်းလှမ်းပါ။
1 Skype အကြောင်း သိလိုသမျှ
2 Skype အတွက် အကောင်းဆုံး အခြားရွေးချယ်စရာများ
3 Google က Hangouts ကို
4 Google က Duo
Skype အကြောင်း သိလိုသမျှ
အ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ဖြစ်လာပြီ။ လူများစွာ ဆက်သွယ်ရန် အဓိကနည်းလမ်း. ဤဆက်သွယ်ရေးပုံစံ၏ အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့သည် ဘက်စုံပလပ်ဖောင်းဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အား မည်သည့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း၊ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် တက်ဘလက်မှ ပြုလုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။
Multiplatform ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ သူတို့က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိသားစု သို့မဟုတ် သူဌေးများနှင့် မည်သည့်နေရာမှမဆို ဆက်သွယ်နိုင်သောကြောင့် သုံးစွဲသူများအတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော စက်တစ်ခုပေါ်တွင် အပလီကေးရှင်းကို run ရန်၊ နားကြပ်များ၊ ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤထုတ်ဝေမှု၏အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့သကဲ့သို့ Skype သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို မတူညီသောလူများအကြား ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါ။. ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရုံသာမက မက်ဆေ့ခ်ျများ ချက်ခြင်း ပေးပို့နိုင်ခြင်း၊ ပုံမှန်ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ဖိုင်များကို မျှဝေခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Skype ကိုရယူရန်၊ သင်သာလိုအပ်သည်။ သင့်စက်များတွင် အက်ပ်ကို ထည့်သွင်းပါ။၎င်း၏ဒေါင်းလုဒ်သည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် သင်သည် အီးမေးလ်၊ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် လုံခြုံသော စကားဝှက်ကို ပေးခြင်းဖြင့် အကောင့်တစ်ခု မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
တပ်ဆင်မှု ပြီးစီးရန် တစ်ခုတည်းသော အရာမှာ၊ သင်၏စာရင်းထဲသို့ အဆက်အသွယ်များထည့်ရန်ဖြစ်သည်။လူ၏အမည် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Skype အတွက် အကောင်းဆုံး အခြားရွေးချယ်စရာများ
အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော Skype နှင့် ဆင်တူသော သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်။ နောက် ဒီအပိုင်းမှာတော့ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သင်ပြပါမယ်။ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရန် အခြားနည်းလမ်းများ။
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေမည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခု၏ စည်းကမ်းချက်များအရ အခြားဂန္ထဝင်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၎င်းကိုအသုံးပြုမှုတွင် အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသော်လည်း ယခင်က တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ Google Hangouts သည် Skype အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ် လူ 150 အထိ စကားပြောဆိုနိုင်သည်။၊ အပလီကေးရှင်းသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး အပြန်အလှန်ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား သင့်လက်ပ်တော့မှသာမက သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် တက်ဘလက်မှလည်း ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး အပလီကေးရှင်းအားလုံးနှင့် ဆင်တူသည်။Gmail အကောင့်တစ်ခုသာ လိုအပ်ပြီး ၎င်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအပြင်၊ သင်သည် ချက်တင်များမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် Google Hangouts ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေးထားသော စာတိုများ ပို့ခြင်း၊ ဖိုင်များ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ စသည်တို့ကို ထည့်ပါ။.
ကျွန်တော်တို့ အခုမှမြင်ဖူးတာတစ်ခုက Google Hangouts အပြင်၊ သင်လုပ်နိုင်တဲ့ Google Duo အက်ပလီကေးရှင်းကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီး ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ပါ။. ၎င်းသည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Android၊ IOS နှင့် iPadOS တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်သည့်အခါတွင် မည်သည့်အမှားအယွင်းမှ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Google Duo ဖြင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ လူ ၃၂ ဦးအထိ အုပ်စုဖွဲ့ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ. ဤအပလီကေးရှင်း၏ အားသာချက်တစ်ခုမှာ လင့်ခ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် စတင်ပြီးသောခေါ်ဆိုမှုများတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် doodles များ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် masks များကိုပင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ကိရိယာများပါရှိပြီး၊ ဤအရာအားလုံးအတွက် Google အကောင့်တစ်ခုဖြင့်ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အခမဲ့အက်ပ်ပေါင်း ပြီးပြည့်စုံပြီး ဆက်သွယ်ရန် အထူးအကြံပြုထားသည်။ မတူညီသောလူများအကြား။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင်ချိတ်ဆက်ရမည့် ဆာဗာများမှတဆင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် ချန်နယ်တစ်ခုတွင် လူ 50 အထိ တွေ့ဆုံရန် ခွင့်ပြုထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်းကဲ့သို့သော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာများ သင်ပြောနေသော အခြားသူများနှင့်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပါဝင်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ ဘော့တ်များထည့်ခြင်း၊ ဖိုင်များ မျှဝေခြင်း စသည်ဖြင့်။ ဤအပလီကေးရှင်းအမျိုးအစားသည် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများကို အာရုံစိုက်နေသူများကြားတွင် အလွန်အသုံးများသည်။
Skype အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာသည် ပြီးပြည့်စုံသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ရှုပ်ထွေးဆန်းသစ်ပြီး Discord သည် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။
၎င်းသည် အသစ်အဆန်းများထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်ခန့်က တယ်လီဖုန်းဆက်ခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းသည် အလွန်ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ တစ်ခန်းတည်းတွင် လူပေါင်း 100 အထိ စုဝေးနိုင်ခြေရှိသည်။ ပါဝင်သူ 1000 အထိ အခပေးဗားရှင်းကို ရွေးချယ်ပါက အခမဲ့ဗားရှင်းရှိ ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပွဲများ။
ဒီဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ ၎င်းကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် အခြေအနေများစွာရှိသည်။; ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ အုပ်စုအစည်းအဝေးများသည် မိနစ် ၄၀ သာ ကြာနိုင်ပြီး၊ အချိန်ကုန်ဆုံးသည့်အခါတွင် အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုရလိုပါက အခပေးဗားရှင်းသို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အခြားရွေးချယ်စရာအလုပ်၏ကမ္ဘာကိုအာရုံစိုက်သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါက ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အလုပ်အစည်းအဝေးများ၊ ကွန်ဖရင့်များ သို့မဟုတ် virtual အတန်းများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ လူ ၂၀၀ အထိ ၎င်းတို့သည် တူညီသော စကားဝိုင်းတွင် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဂျပန်မူရင်းမှ Line သည် မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုကြောင့် သုံးစွဲသူအသစ်များရရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးသည် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သည်၊ သင်သည် မတူညီသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် စစ်ထုတ်မှုများကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ချတ်တွင် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ပုံများကဲ့သို့သော ဖိုင်အမျိုးမျိုးကို မျှဝေရန်လည်း အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ သင့်အဆက်အသွယ်များသာရှိသည့် လူမှုကွန်ရက်ငယ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူကြသူများလည်း ရှိပါသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကိုက်ညီသော မတူညီသော ပလက်ဖောင်းများ ပေါင်းစပ်ခြင်း။ အဖွဲ့လိုက်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လုပ်ငန်းခွင် သို့မဟုတ် ကျောင်းသားအတွက် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
အက်ပ်၊ ရှာဖွေပါ။ မတူညီသော လူအုပ်စုများကြား ဆက်သွယ်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေပါသည်။တူညီသောလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း။ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ခေါင်းစဉ်အလိုက် ချတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသားပေးဖော်ပြရန် ဘုတ်အဖွဲ့များကို စုစည်းရန် ကိရိယာအစုံအလင်ဖြင့် ၎င်းကို ရရှိသည်။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆို ၎င်းကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် စာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို အလွန်လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ မျှဝေရန်၊ တည်းဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်နိုင်စေပါသည်။ Slack ရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်က အဲဒါပါပဲ။ ၎င်းတွင် Google Drive၊ Dropbox၊ Asana၊ အခြားကိရိယာများပါရှိသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့် application များစွာရှိပြီး ၎င်းတို့သည် Skype အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်ပြီးနောက်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော Microsoft tool ၏ အခြားရွေးချယ်စရာခြောက်ခုကို သင်သိပြီးဖြစ်ပြီး သင်၏နေ့စဉ်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်အပြင် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စေရန်အတွက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောရွေးချယ်စရာများကိုလည်း ပေးဆောင်ထားပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » applications များ » Skype ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ
WhatsApp မှတ်တမ်းကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။